Okpukpe ndị Juu nke Mesaịa (United States) - WRSP
Ezigbo ndị Juu (United States)
JUDAISM NA MESSIKA
1813: E hibere Abrahamtù Abraham Abraham na London n'okpuru nkwado nke Society Society maka otingkwalite Iso Christianityzọ Kraịst n'etiti Ndị Juu.
1915: E hiwere Hibru Christian Alliance nke America.
1934: izizi Christian Christian Church bidoro site na Presbyterian Church (USA) na Chicago.
1967: Agha ụbọchị isii n’Izrel malitere, nke mere ka Jerusalem bata n’okpuru ọchịchị ndị Juu.
1973: Ndị Juu maka Jizọs malitere Martin "Moishe" Rosen na American Board of Missions to the Juu.
1975: E degharịrị Christian Christian Alliance nke America ka ọ bụrụ Mesaịa ndị Juu nke America (MJAA).
1979: E hiwere Njikọ nke Ọgbakọ Ndị Juu nke Mesaịa (UMJC).
1986: MJAA guzobere mkpakọrịta nke ọgbakọ, International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues.
1995: Xaashivenu bụ isi ụkpụrụ ka otu ndị UMJC rabaị mebere.
Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na òtù ndị Juu bụ Mesaịa na-ele mmegharị anya dịka nweghachi nke ụdị nkwenkwe kachasị mma na Jizọs, ndị mbụ soro ya bụ ndị Juu. Ọmụmụ ihe gbasara Akwụkwọ Nsọ, na ọtụtụ ndị ndú ndị Juu nke Mesaịa, na-achọpụta na ọ bụ ndị òtù ndị Juu ka ha na Protestant na-esote ndị ọzọ na-esote na narị afọ nke iri na itoolu na mmalite narị afọ nke iri abụọ. N'ọmụma ihe ọmụma, na ọrụ nke ụlọ mba nke oge a, ọtụtụ Western Europe na-ekwu iwu ndị nwere ntụrụndụ nke na-amachibido ndị Juu iwu ka ha ghara ịbụ ụmụ amaala. Ma ihe mgbochi dị mkpa, ma iwu ma, karịa ihe niile, na-elekọta mmadụ, ka na-enwe ọganihu nke ndị Juu na-agagharị agagharị. N'otu oge ahụ, mmasị ọhụrụ maka ozi ndị ọzọ si na Anglo-Protestant na-agafe na ozi ndị ọzọ nye ndị Juu ghọrọ ihe na-ewu ewu. Ihe ndị a mere ka ọtụtụ ndị Juu gbanwee na ọkara mbụ nke narị afọ nke iri na itoolu, karịsịa n'etiti ndị bourgeoisie na-achọsi ike.
Fọdụ n’ime ndị a chegharịrị na London hibere Bene Abraham Association na 1813, otu ekpere nke zukọrọ n’okpuru nkwado nke London Society for Promoting Christianity N’etiti ndị Juu, ndị ozi Anglịkan bidoro afọ ole na ole gara aga. Otu ndị a nyere mmụọ maka òtù ndị yiri ya na United States, ọkachasị ndị Christian Christian Alliance nke America nke hibere na 1915 (Rausch 1983: 44-45; Winer 1990: 9, 11; Cohn-Sherbok, 2000: 16; Feher 1998: 43-44). Iji hụ na njikọta zuru oke ha, a na-atụ anya na “Ndị Kraịst a bụ ndị Hibru” ga-esonye na chọọchị ndị amaara ama na-enwekarị nkụda mmụọ ịlụ di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ jigide akara nke okpukpe ndị Juu iji hụ na ha zuru oke (Winer 1990: 10; Harris-Shapiro 1999: 21-28 ). Nke a bụ ụkpụrụ n'ime etiti narị afọ nke iri abụọ, na ole na ole a ma ama, dị ka nke mbụ Christian Christian Church, nke ndị ụka Presbyterian (USA) hiwere na Chicago na 1934 (Ariel 1997).
1960s kpalitere usoro mgbanwe dị mkpa. N'ịbụ ndị agbata obi mpako na-eme n'etiti ọtụtụ obodo ndị Europe na ndị America, dịka ndị Ịtali, Irish, na ndị Juu (Feher 1998), ụfọdụ ndị Hibru bụ Ndị Kraịst malitere ịhụ uru dị n'àgwà "agbụrụ" ha. Karịsịa, ọnụ ọgụgụ buru ibu a na-enwetụbeghị ụdị ya nke ụmụ ọhụrụ na-eto eto ndị Juu ghọrọ ndị kwere na Jizọs. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha bụ ndị a na-eme ka ha bụrụ ndị a na-asọpụrụ na California n'etiti ndị hippies na "Ndị Jizọs" (Eskridge 2013; Dauermann 2017: 6-11). Ndị a bụ ndị Juu a ma ama na, ruo n'ókè ụfọdụ, okpukpe ndị Juu n'ụzọ dị ukwuu n'ihi nhụjuanya na dispensationalism nke afọ abụọ (Winer 1990: 46-47). Okpukpe nke narị afọ nke a nwere mmetụta miri emi n'ichepụta echiche nke mgbasa ozi mgbe agha 1967 gasịrị na Israel mgbe Jerusalem nọ n'okpuru ọchịchị ndị Juu, nke yiri ka ọ ga-emezu amụma nke Akwụkwọ Nsọ (Luk 21: 24). Karịsịa kpọmkwem, ịkọwa ihe na-ekwu na ndị Juu dị ka ndị Juu nwegidere òkè dị mkpa na Mbịbịa Na-abịa Mezaịa ahụ, karịsịa ndị "fọdụrụ" nke ghọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs. Nye ọtụtụ ndị na-ezisa ozi ọma, na ndị Hibru bụ ndị Hibru, ọ dị ka ọhụụ ọhụrụ na End Times malitere, nke ndị kwere ekwe ndị Juu kwere na Jizọs ga-abụ isi. Ndị ọzọ so na ihe ndị a echetara na npako ha "nchịkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Jerusalem n'okpuru ọchịchị Israel" gbara ọchịchọ maka "okwukwe-nnwere onwe" ha sitere na ụka Ndị Kraịst (Juster na Hocken 2004: 15). Ndị Hibru bụ Ndị Kraịst malitere ikwurịta banyere ọgbakọ ha (Ariel 2013: 214-44; Hocken 2009: 97; Harris-Shapiro 1999: 24-25).
N'otu oge ahụ, 1960s gbanwere nghazi ndị Kraịst na mgbasa ozi ndị Juu. Ihe ndị mere na 1967 mere ka ndị nkwusa ozioma kwụọ ụgwọ iji kwusaa ozi ọma ọzọ, ebe mkparịta ụka ụka dị n'etiti ndị Kraịst na ndị Juu na-eto eto mere ka ụka ndị kwadoro ọdịnala ndị a ịhapụ.. N'etiti mgbanwe a, ndị kwere ekwe nketa nke ndị Juu na Jizọs kwusiri ike na ha nwere ike inyekwu ihe ụzọ dị irè. Na mkparịta ụka na ụka dị iche iche, ndị kwere ekwe nke Juu kwusiri ike ọgbakọ ndị na-asọpụrụ omenala ndị Juu, karịa obodo ndị ozi ala ọzọ. Na mkparịta ụka na ndị na-ezisa ozi ọma, ndị kwere ekwe nke Juu kwusiri ike na ọnọdụ onye na-enyocha ha na-enye mgbasa ozi ọma na nke dị irè. N'akụkụ abụọ, ụlọ ọrụ ndị okenye meworo agadi na-enye ihe mgbakwasị ụkwụ maka ọhụụ ọhụrụ ahụ. Ihe omuma a kacha mara amara bụ ndị Juu maka Jizọs, [nchịkọta ihe ziri ezi] nzukọ ndị ozi ala ọzọ malitere na 1973 site na onye nziputa Baptist na onye nlekọta Baptist aha ya bụ Martin "Moishe" Rosen, nke si na American Board of Missions na-esi n'aka ndị Juu (Ariel 1999 ).
Otú ọ dị, site n'ihe banyere okpukpe Mesaịa nke ndị Juu, ọ bụ nzukọ kasị mkpa nke malitere n'oge a bụ Mesaịa nke United States of America (MJAA), [Foto dị n'akụkụ aka nri] nke kachasị nwee ụdị ya taa. E kere ya na 1975 site na ịsụgharị Ndị Kraịst Christian Alliance nke America. Mgbanwe aha a bụ ihe dị ịrịba ama n'ihi na arụrịta ụka ndị bu ya ụzọ na-enye ihe ọmụma banyere nsogbu ndị na-eche obere obodo nke Ndị Kraịst Hibru. N'okwu sara mbara, o mere ka ọgbọ meworo okenye megide mmeri nke ndị a tọghatara ndị na-akpọzi onwe ha ndị Juu Mesaịa. Ndị nke a chọrọ ọgbakọ dị iche iche; ndị nke mbụ bụ ndị na-asọ oyi ịhapụ ọrụ ndị Kraịst ha gara na nke a họpụtara ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ. Ihe ọzọ na-echegbu ma ọhụụ ọhụrụ ahụ kwesịrị ịgbaso omume Ndị Kraịst na-ewu ewu, nke ọtụtụ n'ime ọgbọ ọhụrụ ahụ bịakwutere Jizọs (Ariel 2013: 220-21; Juster na Hocken 2004: 34). Na njedebe, obere nku meriri ụbọchị ahụ, ọtụtụ ndị okenye na-akwado ya.
Ndị Kraịst Evangelical bịara mara nke ọma banyere mmegharị nke ndị Juu nke Mesaịa na 1980s na 1990s. Ndị Juu na-ekwuchitere ndị Juu na-edegara ndị na-ede akwụkwọ akụkọ ozi ọma akwụkwọ ozi mgbe niile iji gbazie akụkọ ndị Jentaịl na-akọ banyere Izrel ma ọ bụ okpukpe ndị Juu; ha gara chọọchị dị iche iche ịkpọ egwu ndị Juu ma ọ bụ gosipụta Ngabiga Seder; ha mepụtara mgbasa ozi iji kụziere Ndị Kraịst banyere izisa ozi ọma na ndị agbata obi ha bụ ndị Juu (Hocken 2009: 97, 101; eg Rubin 1989). Ka ọ na-erule etiti 1980s, Ndị Kraịst ọzọ malitere ịchọ ọrụ Mesaịa. Thiskpụrụ a toro nke ukwuu kemgbe 1990s, n'ihi ịntanetị. Ndị si mba Caribbean, Africa, Latin America, na ebe ndị ọzọ bụ isi ihe ọzọ na-eweta uto taa. Ha sitere na otutu ulo uka ndi na-adighi onwe ha na ndi Pentikost ma na-ele onwe ha anya dika ndi na-eso akwukwo ndi Ju. Ọnụ ọgụgụ dị mma na-aghọtakwa na ha bụ ndị Juu site na agbụrụ ezinụlọ, mkpughe nke onwe, ma ọ bụ agbụrụ Akwụkwọ Nsọ furu efu nke Israel (Kaell 2017). Atụmatụ ndị e mere na mbụ mere ka ọnụ ọgụgụ ndị mba ọzọ nọ n'ọgbakọ ndị metụtara Mezaịa dị ihe dị ka pacenti iri ise (eg Feher 1998: 47-50; Juster and Hocken 2004: 10; Dulin 2013: 44), pacenti iri isii (Wasserman 2000) ma ọ bụ, naanị, "ndị mba ọzọ karịa Ndị Juu ”(Dauermann 2017: 14). Na nyocha m, achọpụtara m na ndị isi ọgbakọ nke Mesaịa kwuru na ọnụọgụ dị n'agbata pacenti iri asaa na asatọ (lee kwa Dein 2009: 84). Ọnụọgụ a dị elu karịa n’ọgbakọ ndị pere mpe, ndị nọọrọ onwe ha. Taa, okpukpe ndị Juu nke Mesaya bụ òtù dị iche iche na-eto ngwa ngwa.
N'ebe dị mkpa, a pụrụ ịkọwa Mesaịa nke ndị Juu nanị dị ka ọgbakọ na ndị mmadụ n'otu n'otu na-eweta akụkụ nke ndị Juu, nkwenkwe, na imekọ ihe na nkwenkwe na Jizọs (Jizọs n'asụsụ Hibru) bụ Mesaịa (ha Moshia) kwere na Hibru Akwụkwọ Nsọ ndị batara, nke mbụ, dịka onye mgbapụta na-ata ahụhụ, ga-alaghachikwa ikpochapụ End Times. Otu isi ihe dị n'akụkụ Mesaịa ahụ bụ na nzọpụta na-abịa site na ọnwụ ọnwụ nke Jizọs. Ihe ọzọ bụ na ndị Juu, nakwa akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ememme ndị Juu, na-emezu ma ọ bụ "mezuru" na Jizọs. Ojuju ajuju nke ozizi nke "ndi nchichi" (onodi ndi ozo) bu ihe ndi Kristain n'agakwasi na ndi Ju nagburu Chineke na ha n'ihi na ha ekwegh na Jisos, nke gesi na ndi Kristain. Kama nke ahụ, okpukpe ndị Mesaịa na ndị Juu nwere ọrụ pụrụ iche na nkà mmụta okpukpe dị mkpa nye ndị nwere ọdịbendị ndị Juu. Ya mere, ajuju nke ihe omimi nke ndi nchighari puru ighota dika ihe di nkpa nke ndi madu nke ndi Ju. Ọ na-akọwa ihe mere e ji kwesị inwe okpukpe ndị Mesaịa nke ndị Juu na-esite na alaka nke Iso Ụzọ Kraịst nke a na-esite na ya bụrụ ndị a kpọbatara ndị Juu.
N'ikwu okwu bara uru, ọ pụtara na ndị Juu bụ Mesaịa jụrụ echiche ahụ na onye Juu onye nketa na-aghọ Onye Kraịst; ha na-emezu site na mmuta ohuru nke Mezaịa nke bu nke ha. N'otu aka ahụ, Mesaịa na-ele ihe ndị Juu na ọgbụgba ndụ ndị Juu anya dika "mezuo" kama ime ka ọbịbịa Jizọs bịa. Ya mere, ha na-eji ma akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị Juu na nke Ndị Kraịst, nke ha na-akpọkarị Tanakh (dika ndi Juu) na Brit Hadasha. Ebe ọ bụ na a ka na-ele ndị kwere ekwe nketa nke Juu anya dịka ndị Juu, ndị kwere ekwe na Jisos daba n'ụdị abụọ n'ime ọgbakọ Mesaịa: "ndị Juu" na "mba dị iche iche" (na-enweghị ihe nketa ndị Juu). Site na nke Mesaịa, ndị a kwere ekwe bụ nke ime mmụọ nke ga-eduga ndị Juu na "okwukwe" ha ma mezuo nkwa nke amaokwu Akwụkwọ Nsọ (Warshawsky 2008: 3). Ha na-ahụkarị akụkụ nke ọzọ nke ọrụ amụma ha dịka icheta ụka ndị Kraịst na mgbakwasị ndị Juu kwesịrị ekwesị.
E wezụga ihe ndị a bụ isi nke nkwekọrịta, ọgbakọ dị iche iche na n'ozuzu na-ewere usoro na nkwenkwe ha si na chọọchị Ndị Kraịst ma ọ bụ òtù na-akwado ha, kụọ ha, ma ọ bụ zụọ ndị ndú ha. N'ihi ya, otu ọgbakọ nwere ike ịbụ nke a na-apụghị ịchọta na chọọchị Baptist; onye ọzọ ga - abụ Pentikọstal; ma ndi ozo di iche iche. Ka o sina dị, e nwere nkwenkwe ma ọ bụ ọchịchọ zuru oke. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị Juu bụ ndị Mezaịa America kwenyere na ụmụ mmadụ bụ ndị mmehie na nbilite n'ọnwụ nke mmadụ na ikpe, n'ikwekọ na nkà mmụta okpukpe. Ha kwenyere na Chineke bụ "atọ" (mmadụ atọ), dị ka ndị Rom 8: 14-17 na Matiu 28: 18-20: Nna (Abba), Nwa (HaBen) na Mmụọ Nsọ (Ruach HaKodesh). Nzukọ ndị na-agba ume ma ọ bụ nke Pentikọstal na-emesi ike na njedebe nke atọ ndị a. Ihe ka ọtụtụ ná ndị ọgbakọ na-ele Bible anya dị ka mmụọ nsọ sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ozizi ya bụkwa njedebe ikpeazụ n'ihe gbasara okwukwe. Iji mezuo nke ahụ, ndị Juu bụ ndị Juu na-anya isi n'inye ha ihe ha na-ele anya dị ka ihe dị omimi na nke dị mkpa iji ghọta ihe Brit Hadasha site na mmalite nke ndị Juu. Ndị ụka Mesaịa na-echekarị na ụka ụka na ndị nwere obi ụtọ ha gara n'oge gara aga bụ obere ụbụrụ, ha amụghị Akwụkwọ Nsọ n'ozuzu ha, ma ọ bụ na-enye ụfọdụ ihe atụ nke okpukpe ndị Juu na ndụ Jizọs (Dulin 2013; Kaell 2015).
Amụma amụma Apocalyptic dịkwa ezigbo mkpa. Ọtụtụ ndị na-akpọ Mesaịa bụ ndị na-eji mgbasa ozi banyere ọrụ amụma nke ndị Juu na Israel. Ha n'ozuzu na-akwado ala Israel maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke bụ isi ihe ndị metụtara nkà mmụta okpukpe, na-enwe otu echiche ndị dị na nke a dịka ọtụtụ ndị ozi ala ọzọ nke United States. Dị ka m hụrụ n'ebe ọzọ (Kaell 2015), ọtụtụ ndị ndú Mesaịa na-akụzi banyere ọrụ amụma nke ndị Juu (na ndị Juu kwere ekwe na Jizọs, karịsịa) na ụka ụka, online, ma ọ bụ site na akwụkwọ na mmemme TV. Ndị nkụzi ndị a nwere ike iso na ndị òtù Mesianic Jewish ma ọ bụ ndị nweere onwe ha, ha na-ekwe nkwa na, site na ịpịpụta Hebraic mgbọrọgwụ, ha nwere ike ikpughe ihe omimi nke amụma nke Akwụkwọ Nsọ metụtara End Times. Ha malitere ịbịakwute oge mgbasa ozi televishọn na njedebe 1990s na ndị na-ege ha ntị amụbawo nke ukwuu kemgbe ebe etiti 2000s.
Ndị Juu Mesaịa bụ ndị a na-akwanyere ùgwù site n'ememe ndị Juu na ọchịchọ ha na-etinye n'ime ofufe. Ọgbakọ na-arụ ọrụ na Saturday (shabbat), nke gụnyere songs n'asụsụ Hibru (nke a na-akpọkarị abụ Ndị Kraịst n'oge a), ịgụ Akwụkwọ Nsọ, na ngọzi Hibru maka nri na mmanya. Ụdị ejiji na ọdịnaya gosipụtara esemokwu n'etiti charismatics na non charismatics, nakwa ndị omenala ndị Juu na ndị na-abụghị omenala. Dịka ọmụmaatụ, ọgbakọ ndị ọzọ na-eme omenala na-agụnye akụkụ ụfọdụ nke asụsụ Hibru, dị ka Sh'ma na ya ekpere ndi ozo, ebe ndi ozo adighi. N'ọtụtụ ọgbakọ, ma karịsịa na ndị nwere obi ụtọ, ofufe dị nnọọ egwu, na-egosi ịgba egwú, ịkụ ọkpọ, [Foto na nri] na egwu egwu. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị isi na-agbagwoju anya na glossolalia (na-asụ asụsụ dị iche iche), ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na ha nwere ike ịnwụ na mmụọ (Harris-Shapiro 1999: 10-11) na ịbịakwasị aka, otu ekpere Pentikọstal ekpere, bụ ewu. Ọgbakọ na Torah ga-edozi ya gburugburu ụlọ ka a susuo ya ọnụ, na-emekarị n'oge ikuku. Ọrụ na-esokarị otu (nri na mkpakọrịta).
Ọgbakọ gụnyere ọtụtụ emume ọhụụ, dị ka ịgọzi ụmụaka n'okpuru chuppah (mkpuchi nke ndị Juu na-eji agbamakwụkwọ ha) na ime baptizim niile nke ndị kwere ekwe toro eto. Oriri Nsọ (inginging bread na wine) bụ ihe a na-ahụkarị ma a na-eme ya kwa ọnwa. A na-elekarị omume a anya dị ka nke nwere ezigbo ike, ọ bụ ezie na ihe nke a pụtara na-abụkarị enweghị nkọwa. Ọtụtụ ọgbakọ amalitewokwa ememe ndị gụnyere ite mmanụ ma ọ bụ ibikwasị aka n'isi, nke a na-ewu ewu n'etiti charismatics dị ka ụzọ isi gosipụta ike ọgwụgwọ nke Mmụọ Nsọ (Juster na Hocken 2004: 37). Ndị na-efe ofufe n'otu n'otu nwere ike ịhọrọ iyi uwe ndị Juu, nke na-abụkarị ogologo (ekpere mkpuchi) na kippa (okpu okpokoro isi). N'ebe ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ, (n'ozuzu ụmụ nwoke) ọgbakọ nwere ike ịfụ ụda site na pews. N'okpukpe ndị Juu, a na-afụ opi ebule n'ihu ndị ọgbakọ (ọ bụghị ha), a na-ejikọkarị ya na ezumike dị elu, ma machibido iwu na Shabbat. N'ebe ndị metụtara Mesaịa, shofar na-echeta mpi ndị ga-eso nloghachi nke Mezaịa ahụ, a na-echekarị ya na ọ na-akpọ ndị mmụọ ozi na-agwọ ọrịa na ngọzi n'oge ofufe. Ndị mmadụ n'otu n'otu nwekwara ike ịhọrọ ịgbaso akụkụ nke iwu 613 na Torah, na-emetụtakarị idebe kosher site na ịmachi nri ndị ndị Juu rabaị nabatara (obere ọgbakọ ndị Mezaịa na-eme kashrut ka ọ bụrụ ụkpụrụ omume ma na-agbaso usoro iwu ndị Ọtọdọks ndị ọzọ). A na-ebi ụmụ nwoke úgwù mana enweghị nghọta doro anya gbasara ndị otu nwoke kwenyere na ha achọpụtala nketa ndị Juu; ụmụ nwoke a na-ebighị úgwù nwere ike iche na a kpọrọ ha ka ha bịa ememme ahụ. Ọtụtụ ndị Mesaịa (ọkachasị nke ihe nketa ndị Juu) na-emekwa emume ndị ọzọ dị ndụ, gụnyere Bar Mitzvah ma ọ bụ mmemme nraranye, agbamakwụkwọ, na olili ozu na ihe ndị sitere n'okpukpe ndị Juu.
Egwú bụ ihe omuma ihe maka ndị Mesaịa na United States. Ụfọdụ n'ime ndị mbụ Messianic na-ekwusa na California na 1960s na 1970s bụ site na-egwu egwu n'okporo ámá. Otu dị iche iche nke oge ahụ, dịka Nwa-atụrụ ma ọ bụ Nwepụpụ Wailing Wall, bụ akụkọ ntụrụndụ taa (ma duru ndị ntorobịa nke Mesaịa, ụfọdụ n'ime ha bụ ụmụ nke òtù ndị ahụ). A na-akpọkarị egwu Mesaịa na Israel na klezmer-inflected rhythms, na-esiri ike nduzi na-aga Christian music oge a. Otu ihe a ma ama nke omenala a bụ Mesaịa (ma ọ bụ "Davidic") na-agba egwú, [Foto na nri] nke dabeere na Israel. Ọ kachasị ewu ewu n'etiti ụmụ nwanyị, ọ bụ ezie na ụmụ nwoke nwere ike itinye aka. A na-egwu egwú egwú David n'oge ọrụ Mesaịa ma kụziere ya na klaasị. Egwú na ịgba egwu Mesaịa nwere ihe siri ike n'etiti ndị Kraịst na-abụghị ndị Kraist na ndị Kraịst na ndị na-ahụkarị site na vidio nkuzi n'ịntanetị nakwa site n'ijegharị ndị nkụzi Mesaịa.
Ụbọchị ezumike na-eme ka ndị Juu Mesaịa maliteghachi na kalenda ha na ndị mmadụ na-elekọta ndị Juu. Ndị kwere ekwe n'otu n'otu dị iche iche banyere ụdị ezumike ha na-ahọrọ ime ememe, ma ndị Juu ma ndị gentile. Otú ọ dị, ọtụtụ, ma eleghị anya, ihe niile, ọgbakọ dị iche iche bụ Rosh Hashannah, Yom Kippur, Hanukkah, Purim, na Shavuot (Pentikọst). Ụbọchị ezumike abụọ ahụ bụ Sukkot na Ememe Ngabiga, nke na-eme n'oge mgbụsị akwụkwọ na mmiri. Ndị Messiah "mezue" nghọta ndị Juu banyere ememe ndị a site n'ịgụghachi ha site n'aka Jizọs. Ya mere ubochi nke Kippur bu Jisos na mkpuchi nmehie ya. Hanukkah na-eme ememe nke Jeshua na ọnọdụ ya dịka ìhè nke ụwa. Nzọpụta anụ ahụ na Purim na-ese onyinyo nnapụta ime mmụọ site n'aka Jizọs. Na Brit Hadasha n'ezie kwuru banyere Sukkot (John 7-9) dị ka oge Jizọs na-enye ozizi amụma dị ike na Jerusalem. N'ihi ya, ọtụtụ Ndị Kraịst na-ekwusa ozi ọma na ndị Mesaịa bụ ndị Juu na-emekọ ihe nnọkọ nkwonkwo ndị Gentile na ndị Juu nke Sukkot (karịsịa na Jerusalem) dị ka ihe ịrịba ama nke ọgwụgwụ Times. Ememe Ngabiga Ememme Ngabiga bụ ememme ezumike kachasị mkpa na ememme ememe a na-eme ememe n'etiti ndị Juu Mesaịa, bụ ndị dere ọtụtụ ntụziaka ntụziaka maka mmetụta ahụ. A na-emekarị ya na ọgbakọ Mezaịa na n'ụlọ ndị Juu nke Mesaịa. Dị ka ememe ndị ọzọ, ihe ndị Juu sụgharịrị pụtara site na nsụgharị nke Akwụkwọ Nsọ: ihe nchịkọta atọ ahụ na-egosi Atọ n'Ime Otu; ọbara na lintel (ya mere Ọnwụ "gafere" ụlọ ndị Juu n'oge ihe otiti dị n'Ijipt) na-egosi ọbara n'elu obe; nnwere onwe na nnwere onwe nke ụmụ Israel na-ese onyinyo mgbapụta site n'aka Jizọs. Site na oghere ndị a, ihe ndị Juu na-ebute ọbịbịa Jizọs yiri ka ha gosipụtara na atụmatụ Chineke, dị ka Mesaịa ghọtara ya, buru amụma site na mmalite.
Okpukpe ndị Juu bụ Mesaịa bụ ọrụ netwọk nke oziọma na ọgbakọ. [Foto na nri] Ọtụtụ ọgbakọ dị iche iche, gụnyere obere ụlọ ahịa, ụlọ ụka, na otu ekpere; a ghaghị ịgụ ma ọ bụ mụọ ọ bụla dị omimi. Na ahụmahụ m, ọ ga-abụ na ndị njem na-adịbeghị anya na-agba ọsọ na North America, karịsịa site n'Africa, Caribbean, na Latin America. Nzukọ ndị ọzọ dị na United States bụ ụlọ ụka nke ọma na-anata ego n'aka ụka ụka ma ọ bụ ọrụ nlekọta. Ndị ọzọ na-akwado onwe ha, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a, na ndị a nwere ike isi na obere ọgbakọ gaa na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị buru ibu na ihe karịrị narị mmadụ abụọ. Ọtụtụ obodo ndị dị n'Ebe Ugwu America nwere ọgbakọ ole na ole nke Mesaịa, na-anọchite anya ọtụtụ ụdị na nkwa. Mmadụ ole na ole nwere ụlọ nke aka ha, ma ọtụtụ n'ime ha na-enweta ebe nsọ dị na chọọchị na Saturday. Ọ bụrụ na ha dị oke ezu, ọgbakọ na-eme ihe omume obere ìgwè n'izu, na-ejikarị ekpere ma ọ bụ mmụta Akwụkwọ Nsọ. Ụfọdụ ọgbakọ na-agba ume site n'ọnụ ụzọ ma ọ bụ n'okporo ámá n'okporo ámá n'ógbè ndị Juu, ma na ahụmahụ m, ọtụtụ ndị adịghị. Nzukọ niile na-eme ihe omume, karịsịa maka ezumike ndị Juu, n'oge a na-agba ndị òtù ume ka ha bịakwute ndị enyi ndị Juu, ndị ezinụlọ, ndị enyi, ma ọ bụ ndị ọrụ ibe ma kpọọ ha ka ha bịa.
Ọgbakọ nwere ike ịhọrọ ịmekọrịta na mkpakọrịta ole na ole na-ekerịta ihe onwunwe na ịmepụta ihe ụfọdụ n'ime ije ahụ. Ndị isi abụọ bụ International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues (onye enyemaka nke MJAA) na Union of Messianic Jewish Congregations (UMJC). Ha na-arụkọ ọrụ ọnụ n'otu n'otu na onye ọ bụla na-akwado ihe omume gburugburu ụwa, dị ka nzukọ na ogige okpomọkụ. Ha na-egosikwa ndị ndu ọgbakọ, nke a na-akpọkarị ndị rabaị. Òtù dị nta nke òtù dị iche iche nwekwara njikọ, dịka Njikọ nke ọgbakọ ndị Juu na Mesaịa na Federation nke Ọgbakọ Mesaịa. Nzukọ nile nke Chineke (Pentikọstal) na Southern Baptist Convention amalitekwara nkuzi ndị nkuzi ha nke na-edozi ndị rabaị bụ ndị Mesaịa ma na-akwado ọgbakọ. Ndị na-ekwusa ozi ọma, dịka ndị Juu maka Jizọs, ndị a họpụtara ahọ ndị ụkọchukwu, na ndị Minista Ariel, jikọtara ma na-akwado ọgbakọ dị iche iche. Ọtụtụ, na ma eleghị anya ọtụtụ, ndị isi ọgbakọ ka na-azụ ma na-ahọpụtakarị site na ụlọ Akwụkwọ Ndị Kraịst na seminarị. N'ọgbakọ ọgbakọ dị ala, ndị isi nwere ike ịghọta ikike ha nwere ikwusa ozi dịka ọ na-abịa site n'aka Chineke. Hashivenu, otu ndị e mere n'etiti 1990s site na ndị rabaị UMJC, na-ekwupụtakwa okwu mmụta sayensị ma na-aga ebe nrụọrụ weebụ na Ụlọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Ndị Juu nke Mesaịa. O meela ka arụmụka dị ịrịba ama n'etiti ụfọdụ ndị ndú ndị Juu na-agbanye n'ọsọ ahụ, dịka e kwuru na ebe a.
N'ikpeazụ, ndị Juu bụ Mesaịa bụ nnukwu ndị nna ochie. A na-eme ka ndị mmadụ bụrụ ndị pastọ ma lelee anya dịka ndị nkụzi, ndị ọkà mmụta okpukpe, na ndị isi kachasị ikike. Enwekwara mmasị dị ukwuu maka ndị Juu-ndị nketa na ndị isi, dịka ndị ndú ọgbakọ, ndị edemede, ndị ọkà okwu, ma ọ bụ ndị nkụzi. N'ọtụtụ mba, ha bụ ndị Ashkenazi (Europe), ma na-agụnye ọtụtụ ndị ndú oge mbụ na ụmụ ha. N'ọgbakọ ndị na-enweghị isi na ndị dị ntakịrị, e nwere ọtụtụ ndị ndú n'etiti ndị si mba ọzọ na-adịbeghị anya na ndị nwere agba, ọtụtụ ndị nwere ike ile onwe ha anya dị ka ihe nketa ndị Juu. N'ịgagharị na pews, enwere ọtụtụ ezinụlọ na-eto eto na ọgbakọ Mesaịja karịa ụka ụka. Nchọpụta m, yana nnyocha ndị na-adịbeghị anya banyere ọgbakọ United States na UK (Dulin 2013; Dein 2009), na-atụ aro na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile gbakọtara, gụnyere nke ndị Juu, na-abịa na-eme ka ndị okenye site na chọọchị. N'ime afọ iri gara aga ma ọ bụ otú ahụ, ụfọdụ ọgbakọ Mesaịa amalitela ịkwado onwe ha dị ka ebe dị mma nye ezinụlọ Ndị Kraịst-ndị Juu jikọrọ ọnụ. Ma ha ga-aga nke ọma n'ịba ọtụtụ n'ime ezinụlọ dị otú ahụ ka ga-ahụ. Ihe nyocha kachasị na-egosi na ụmụ nwanyị na-enweta ihe dị ka pasent 60 nke ndị ụkọchukwu (nke bụ ụkpụrụ na Iso Ụzọ Kraịst nke United States), ọ bụkwa n'echiche m na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị nwere agba, gụnyere ndị Africa Africa nọ n'obodo dịka Atlanta, karịa ka a na-ekwenyekarị . Achọpụta nyocha dịkwuo mkpa na nke a.
Pokọwapụta nhazi nke okpukpe ndị Juu nke Mesaịa dị mgbagwoju anya site n'ụdị o ji gbasaa. Ọ nwere mmetụta dị ukwuu n'ịntanetị n'etiti (ọkachasị ndị na-abụghị ndị Juu) ndị na-ege ntị na-efe ofufe ma ọ bụ klaasị Akwụkwọ Nsọ Mesaịa n'ụzọ dị anya. Achọpụtala m na ọtụtụ ndị ọgbakọ ka bụ "ndị na-achọ mmụọ" n'echiche nke na ha nwere ike ịga ụka n'otu oge ma jikọọ aka, maka ogologo oge ma ọ bụ karịa (Kaell 2014; Feher 1998). Nke a na - eweta ihe ịma aka nye ndị ndu na - anwa imepụta obodo ga - ejide onwe ha, jikọọ ọnụ. Okpukpe ndị Juu nke Mesaịa jikọtara n'ụzọ dị ịrịba ama na ọnọdụ ndị a na-akpọ "philosemitism," "mmekọrịta ndị Juu" ma ọ bụ "mgbọrọgwụ Hebraic" (Sandmel 2010; Karp na Sutcliffe 2011). Ọ bụ ezie na nke ọ bụla n’ime okwu ndị a nwere nkọwa dị iche iche, o zuru ezu ịkọwa ha dị ka mgbanwe izugbe n’etiti ndị Kraịst na-enwe mmetụta dị mma banyere ndị Juu (ma ọ bụ ụmụ Izrel nke Akwụkwọ Nsọ), nke na-eduga na nnabata na mmegharị nke emume ndị Juu. Dịka ọmụmaatụ, ụka ụka Pentikọstal nwere ike iwebata agba egwu na-adabere na nghọta ha banyere mmegharị Akwụkwọ Nsọ nke ndị Juu, ngwa na uwe. Chọọchị ọzọ nwere ike ịkpọ onye rabaị ndị Juu bụ́ Mezaịa ka ọ fụchie onye ụkọchukwu ha n’akwụkwọ mpịakọta nke Tora, bụ́ ememe a na-ewetakarị ịma ndị Juu ikpe ma ọ bụrụ na a kọọ ya n’usoro mgbasa ozi. Chọọchị ọzọ nwere ike itinye akwụkwọ ndị Juu mepụtara nke ndị Juu na klas ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ Seder.
Ụdị nile nke "ịba mma" na-esiwanye ike kemgbe 1990s, nke ndị Juu na-akpọ Mesaịa na-agba ume na oge ndị ọzọ ikpe. Ọ bụ ezie na ndị isi na MJAA na UMJC na-anwa ịtọgharị omume ha site n'aka ndị ọzọ, ma kọwaa nke ndị nzukọ Mesaịa na-anabata ma ọ bụ, ọ bụ n'eziokwu na ndị mmadụ bịarutere Mesianic nke ndị Juu na-agbanwe n'okwu ha, okike, na multivocal. Ọ bụ ezie na ndị Juu ndị Juu na-eto eto n'ụzọ doro anya, njirimara ndị a na-eme atụmatụ nke ọnụ ọgụgụ ndị United States na-aga na Saturday ọbụla ọ bụla agaghị ekwe omume ịchọpụta ihe ọmụmụ dị ugbu a. Atụmatụ dị iche iche si na 30,000 gaa na 2,000,000, nke kachasasị na 150,000 ka 300,000. Ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ nwere ike ma ọ bụ enweghị ike ịgụnye mba dị iche iche ma na-agụnyeghị ndị ha na ha na-emekọ ihe ọnụ ma ọ bụ na netwọk. Ha na-apụkwa ma eleghị anya ọtụtụ narị ọgbakọ ndị na-ekwu na Hebraic mgbọrọgwụ n'ụzọ ndị na-ekwekọghị na nghọta ndú Mesaịa nke ndị Juu banyere usoro ahụ.
Nye ndị ọkà mmụta, okpukpe ndị Juu bụ Mesaịa bụ ihe na-adọrọ mmasị, na ihe ịma aka, na otú ọ na-esi emegide ókèala okpukpe ndị doro anya. N'ihi ya, ha na-enwekarị mmasị n'ịgba ụka ma okpukpe ndị Juu bụ Mesaịa bụ ọdịdị nke mmekọrịta, ngwakọ, ma ọ bụ ịzụlite, dabere na nkọwa nke okwu ndị a n'ọmụmụ ihe ọmụmụ okpukpe na mmekọrịta ọha na eze. Nye ndị Juu Mesaịa n'onwe ha, nakwa ndị Juu na ụfọdụ Ndị Kraịst, ihe kachasị mkpa metụtara onye esonyere ma ọ bụ wepụ ya dị ka onye Juu. Ajụjụ a na-arụ ọrụ na ọkwa ole na ole n'otu oge. N'ihe banyere edemede ndị na-edegharị akwụkwọ, ndị Juu na-ajụkarị okpukpe Mesaịa dịka alaka nke okpukpe ndị Juu (Shapiro 2012), na ole na ole ndị a ma ama, dị ka Ndozigharịzi Rabbi Dan Cohn-Sherbok bụ ndị na-akpọ "ihe nlereanya nke ọtụtụ ndị Juu" (2000: 212). Ụdị a n'etiti ndị Juu nwere ike ịgbanwere n'ọdịnihu ma ndị Juu na-ekpe ekpere mgbe ụfọdụ na-arụ ụka na ọ dịlarị agbanwe, ọ dị iche na Israel, ma ọ bụ nchịkọta data na-eduhie. Site na ndi Ju nke Mesaja, o doro anya na ndi Ju ndi Ju bu ndi Ju (ndi mezuru ma mezue), otutu ndi isi nke Mesaisi neme ka ndi nenwe ndi Ju ma obu ndi nata. Ndị isi nke Mesaịa na-ewere ọnọdụ abụọ: ha na-arụrịta ụka, na mbụ, "Chọọchị Rabbinical" bụ nanị otu, ọbụnadị dị mkpụmkpụ, na-arụ ọrụ n'etiti ndị Juu na Alaeze Ukwu Rom ma si otú ahụ ndị na-eso ụzọ Jizọs dị ka onye ziri ezi dị ka onye bu ụzọ nke ndị Juu oge ochie; na nke abụọ, na ọ bụrụ na ndị Juu na-atụle ndị na-eme omenala ọdịda anyanwụ ma ọ bụ ndị na-ekweghị na Chineke dịka ndị Juu, ha ekwesịghị ịgọnahụ ọnọdụ a nye ndị na-eso Jizọs.
Nye ndị ndú ndị ndú Mesaịa, e nweela mgbakọ abụọ dị mkpa nke ịnakwere dị ka ndị Juu n'ime afọ. Nke mbụ gbasara ọchịchị ala nke Israel "Iwu nke Nloghachi." Na 1989, Ụlọikpe Kasị Elu nke Israel kpebiri na ndị Juu bụ Mesaịa agaghị erubere ụmụ amaala na-adabere na ịbụ ndị Juu ebe ọ bụ na ha ejiriwo aka ha kpee okpukpe ọzọ. Otú ọ dị, na 2008, ọ na-ekwu na ebe ọ bụ na e nyere onye ọ bụla nwere nne na nna ndị Juu, ndị Juu Mesaịa nwere ike iru, nke bụ nnukwu mmegide maka ndị sitere na ndị Juu a ma ama. Ihe ịma aka nke abuo gbasara mmekorita ndi otu ekpere. Ndị ndú ndị Juu na-ekwenyekarị na ha ga-agụnye "ihe kachasị mkpa na mkparịta ụka ndị Juu na Ndị Kraịst" (Kinbar 2001: 32-33) n'ihi na ha na-ejikọta ihe sitere n'okwukwe ma si otú a gosipụta ịdị n'otu ha. Ọtụtụ ndị Kraịst na ndị Juu na-emesapụ aka na-ekwenyeghị na ya ebe ha na-eleghị ndị Mesaịa anya dị ka ndị na-anọchite anya akụkụ abụọ nke mkparịta ụka a. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na 1960s, ndị Juu na nkwurịta okwu ha na-emesapụ aka esipụwo ozi ọma dị ka enweghị nkwanye ùgwù na mbibi nke okpukpe ndị Juu. Ndị Juu bụ Mesaịa jụrụ echiche a, ma karịsịa nke ndị nketa nke ndị Juu, na-arụ ụka na ịgbasa Oziọma bụ ụdị ịhụnanya, nlekọta, na ichekwa nke ndị Juu n'okpukpe dị ukwuu nke Jeshua. Echiche a bụ onye ala ọzọ, nke a na-agbagwoju anya nke ukwuu, nye ndị Juu na-ekiri ọrụ ahụ. Ndị Evangelicals nabatara na ndị Juu Mesaịa dị ka ndị Juu dum, ọ bụ ezie na a na-enwe ụfọdụ arụmụka banyere otú ha ga-esi tinye ha na nkwurịta okwu 'ngwakọta'.
Ndị ndú ndị Juu na ndị ọkà mmụta okpukpe bụ ndị na-arụ ụka na ha bụ ndị Juu zuru oke, bụ ndị na-abụghị ndị Juu (ndị Ashkenazi) bụ ndị Juu. N'akụkụ ọzọ, ọ bụ ihe ịma aka dị n'ime onye ga-agụnye dịka onye Juu n'ime ọgbakọ. Nke a bụ ma eleghị anya nsogbu siri ike na-eche ihu ka ọ gbasaa site na itinye aka na ndị ọzọ. Ndị Jentaịl na-eme ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'ime ndị ụkọchukwu ma mee ka ọgbakọ dị iche iche na-ahụ maka ego, ma ọtụtụ ndị ọkà mmụta na-akọwa na ọnọdụ ha nwere ike "akọwa dịka nke nke abụọ" (Power 2011: 45; Feher 1998; Harris-Shapiro 1999: 71). Ihe nchọpụta ndị a pụtara bụ na ndị Juu na-agbapụta ndị mmadụ bụ ndị isi n'ọkwá mba ma na-enwe mmasị dị ukwuu dị ka ndị isi na ọgbakọ dị iche iche na otu òtù (MJAA, UMJC, na ndị dị otú ahụ). Ọ bụ ezie na ọgbakọ ndị ọzọ na-akwalite mmekọrịta dị n'etiti ndị kwere ekwe na ndị kwere ekwe na ndị Juu na ebe nrụọrụ weebụ ha, ndị ikpeazụ ka dị ọnụ ahịa karị: ọgbakọ nwere ikike dị ukwuu ma bụrụ eziokwu na ndị ọzọ na-esite n'aka ndị Juu na-adọta; nke ahụ bụ eziokwu banyere mba dị iche iche. Nsogbu ọzọ na-adabere na nkọwa nke onye Juu, ebe ọ bụ na ọ dịghị ụkpụrụ ọ bụla dị n'akụkụ ọgbakọ. Onye a zụlitere onye Juu ma ọ bụ nwee otu nne ochie ndị Juu na-agụnye mgbe niile. Ndị Jentaịl ndị lụrụ di na nwunye na mpaghara ndị a na-agụkarị. Ọtụtụ ndị na-eche na a na-akpọ ha n'ọgbakọ Mesaịa wee ghọta onwe ha dịka ịchọtara ihe nketa ndị Juu, ọtụtụ mgbe ọgbọ dị iche iche laghachiri; a pụkwara ịgụnye ha, ma ọ bụrụ na akụkọ ha kwekọrọ n'ụkpụrụ ụfọdụ (Kaell 2016). Otú ọ dị, MJAA na ndị ọzọ na-ajụ ajụ ndị mba ọzọ na-aghọta onwe ha na ha bụ ụmụ nke Akwụkwọ Nsọ Lost Tribes ma ọ bụ Ephraim na Menasseh, ma nyekwa ha ikpe siri ike n'akụkụ a. Ha na-echekwa na ị na-agwa Hebraic mgbọrọgwụ ma gbalịa igbochi ozizi ndị a na-ewu ewu n'ime njem ahụ, nke ha na-ele anya dịka ọdịdị ọdịda nke na-eme ka mba dị iche iche ghọọ ndị Juu ma si otú a dochie ha. N'okwu ka ukwuu, esemokwu a metụtara onye na-akọwa ihe bụ "Mesianism of Judaism": ndị malitere ụlọ ọrụ ndị isi ma ọ bụ ndị na-azụ ya taa.
Ihe ịma aka metụtara ya na-emetụta nchebe Torah. Ndi kwere ekwe nke Kraist kwere na nzoputa bu site na amara nke nzoputa nke Jisos, na amara nwekwasi iwu nke Torah (2 Cor 3: 7). Ma okpukpe ndị Juu bụ Mesaịa nabataghachi ihe ụfọdụ nke ememme ndị ahụ na iwu ndị sitere na iwu 613 nke Torah, dị ka ọtụtụ ndị Mesaịa na-ahụ onwe ha dị ka ndị na-esote "Akwụkwọ Nsọ" nke ndị Juu ma na-enwekarị echiche na-ezighị ezi banyere ihe ha na-akpọ "rabbinic" okpukpe ndị Juu. N'ihi nke a, ihe kpatara ịgbaso Torah na-arịa ọrịa na nkà mmụta sayensị, a na-elekarị ya anya na okwu dị egwu na-enye ụfọdụ uru nke sacramental ma ọ bụ ịdị nsọ (kama "ịzọpụta" amara). Ọzọkwa, ọ dịghị nkwekọrịta ọ bụla a ga-agbaso na omume kwesịrị ma ọ bụrụ na a ga-atụ anya ka ndị a na-ele anya dịka mba dị iche iche, ma ọ bụ ọbụna kwere, ime ya (Kaell 2016). Ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ / ọgbakọ Pentikọstal na-achọkwa ịmegharị ọtụtụ ememe nke 'Akwụkwọ Nsọ', ebe ndị omenala ndị ọzọ na-achọ ịgbaso ụkpụrụ ndị Juu oge ochie, dịka ọmụmaatụ banyere iwu ndị rabaị metụtara kashrut ma ọ bụ Ụbọchị Izu Ike bụ usoro nke ndụ ndị Juu. N'ikpeazụ, ndị mmadụ n'otu n'otu na-achọ imezi iwu nke Torah na nkwurịta okwu na ọgbakọ ha, ihe ndị dị n'igwe, na (mgbe) Mmụọ Nsọ.
Ihe ọzọ nke esemokwu na-eche ma mba dị iche iche nwere ike ịtụgharị, dịka ha nwere ike isi na-ekpe okpukpe ndị Juu. Maka onye ndú Mesaịa nke ndị Juu na MJAA na UMJC, a na-ele nke a anya dị ka ihe na-agaghị ekwe omume ebe ọ bụ na mba dị iche iche enweghị ike ịnakwere ihe ha na-ele anya dị ka agbụrụ ndị Juu a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Otú ọ dị, n'ime iri afọ abụọ gara aga, mmiri ọhụrụ esiwo na UMJC, nke akwụkwọ nke UMJC rabbi Mark Mark Ozizi Mesaịa bụ Mesaịa (2005). Hashivenu, dị ka a na-akpọ ya, ka bụ ebe dị anya; Otú ọ dị, ndị na-akwalite ya (karịsịa ndị Juu bụ ndị nketa nke ọnọdụ na njem ahụ) na-arụ ụka na-egosi na "ndị Kristian" tozuru okè ga-agabiga ozi ọma, na-akwalite ndụ ndị Torah-na-ele anya n'ụzọ zuru oke, site na ikwe ka ndị mmadụ gbanwere. Òtù a ejirila Ụlọ Nzukọ Ọmụmụ Ndị Juu nke Mesaịa na Mesabi Ndị Juu Rabbinical gbasasịa ozi ndị a ma nyefee mgbanwe. N'echiche a, okpukpe ndị Mesaịa kwadoro "njirimara nke ụka" dịka mgbasa ozi nke mba ndị Izrel "(Kinzer 2005: 15; Reason 2005; Power 2011 82-84; Dauermann 2017: 11-17). Ọtụtụ ndị ndú Mesaịa na ndị pastọ Kraịst.
Ihe ịma aka ikpeazụ (na ohere) gbasara njikọ dị n'etiti United States na ọgbakọ dị iche iche. Ndị njem nke United States bụ ndị na-anyazi ndị Juu nke Mesaịa oge ochie, n'ụzọ dị ukwuu n'ihi obodo siri ike na nke a kwadoro nke ọma nke ndị Kraịst. Onye ochichi United States kwetara ma kwadoo ọgbakọ ole na ole ndị e guzobere na UK, Russia, na ebe ole na ole n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Europe. N'ezie, Israel nwere nnukwu ihe atụ, ndị ozi ala ọzọ nke United States ejiriwokwa ọtụtụ ọgbakọ ọgbakọ ndị ahụ kwado ma kwụọ ha ụgwọ. Ọ bụ ezie na njikọ ego na-ejikọta, Mesian Israel na-esiwanye ike ịkọwapụta na mmegharị ahụ dị iche iche dị iche iche na ọnọdụ ahụ ma na-arụpụta ọtụtụ nnwere onwe. Ọzọkwa, dịkwa ka ọ dị mkpa, ọgbakọ ndị Juu na-emekọ ihe ọnụ na-eto eto ugbu a (Parfitt na Semi 2002), tinyere na Brazil (Lehmann 2013; Carpenedo 2017), Europe (Gonzalez 2014), Papua New Guinea (Handman 2011; O'Neil 2013) na n'ebe ndị ọzọ. Ndị ozi ala ọzọ nke United States na United States na-akụ ma ọ bụ gbaa ha ume mgbe ụfọdụ (Handman 2011; Gonzalez 2014: 126-28), na ndị ọzọ amalitela na Ụbọchị Seventh Day Adventist, British Israelism, na ndị ọzọ na nkà mmụta okpukpe. Ọtụtụ ndị ọzọ na-esi n'ọtụtụ dịgasị iche iche na-esite n'aka ndị ụka na ndị Pentikọstal ndị dị n'èzí West, nke mere ka ha lee onwe ha anya dị ka ndị Juu ma ọ bụ Israel. N'agbanyeghị ihe kpatara ya, okpukpe ndị Mesaịa na United States ga-agbaso ụka a na-eto eto na-abụghị nke ọdịnala nke West na Israel, dị ka mmụba nke ndị kwabatara na-esonye ma chọta ọgbakọ dị na ala US.
Foto #1: ndị Juu maka Jizọs.
Foto #2: Aha ndị Juu nke America nke America.
Foto #3: Shofar-blowing.
Image #4: agba egwú Devid.
Foto #5: Ozizi ndị Juu nke Mesaịa.
Ariel, Yaakov. 2013. Mmekọahụ na-adịghị mma: Ndị Kraịst bụ ndị Kraịst na ndị Juu. New York: New York University Press.
Ariel, Yaakov. 1999. "Counterculture na Mission: Ndị Juu maka Jizọs na Mgbasa Ozi Ala Ọzọ Vietnam, 1970-1975." Okpukpe na American Culture 9: 233-57.
Ariel, Yaakov. 1997. "Eschatology, Evangelism, na Dialogue: Mission Presbyterian nke ndị Juu, 1920-1960." Akwụkwọ Journal of Presbyterian History 75: 29-41.
Carpenedo, Manoela. 2017. "Ncheta mkpokọta n'ime mgbanwe nke okpukpe: Ikpe nke 'ndị Juu na-abata' na-eso ụzọ Jizọs.” Religion 48: 83-104.
Cohn-Sherbok, Dan. 2000. Okpukpe ndị Juu nke Mesaịa. London: Cassell.
Dauermann, Stuart. 2017. Na-agbanwegharị Mbibi: Ndị Juu, Ndị Kraịst, na Ozi nke Chineke. Eugene, OR: Cascade Books.
Dein, Simon. 2009. "Ịghọ Ezigbo Onye Juu. Nnyocha Omume nke Onye Britain. Nzukọ Ndị Juu Mesaịa. " Nova Religio: Journal of Alternative and Religious Emergencies 12: 77-101.
Dulin, John. 2013. "Ebe ndị Juu bụ Mesaịa dị ka Ụdị Onye Kraịst Bụ Eziokwu: Ịchọgharị Ụkpụrụ nke Eziokwu Site na Ethnography nke Identity Identity." Anthropos 108: 33-51.
Eskridge, Larry. 2013. Ezigbo Ezinụlọ Chineke: The Jesus People Movement na America. New York: Oxford University Press.
Azụ, Shoshanah.1998. Ịgafe Ista: Ịzụlite ókèala nke ndị Juu nke Mesaịa. Lanham, MD: AltaMira Press.
Gonzalez, Philippe. 2014. Que ton règne vienne. Geneva: Labour na Fides.
Handman, Courtney. 2011. "Ihe omimi nke imekorita onwe ya na uzo: usoro umu Israel na Guhu-Samane Christian Commitment." Ngwurugwu nke Anthropological 84: 655-77.
Harris-Shapiro, Carol. 1999. Okpukpe ndị Juu nke Mesaịa: Njem nke Rabbi site na Mgbanwe Okpukpe na America. Boston, MA: Beacon Press.
Hocken, Peter. 2009. Ihe ịma aka nke Pentikọstal, Mgbagha Ndị Juu na Mesaya: Esemokwu nke Mmụọ. Abingdon: Ashgate.
Imhoff, Sarah na Hillary Kaell. 2017. "Ihe ndị na-ekwu okwu ntanetị: DNA, agbụrụ, na Gene na-ekwu okwu n'okpukpe ndị Juu na nke ndị Juu." Okpukpe na American Culture 2: 95-127.
Right, Daniel na Peter Hocken. 2004. Ndị Juu nke Mesaịa: Otu Okwu Mmalite. Ventura, CA: Na Jerusalem Nzukọ II. Nweta site na http://www.messianicjewishonline.com/essays.html na 20 February 2019.
Kaell, Hillary. 2016. "N'okpuru Iwu Chineke: Mimetic ịbụ onye na-eso ụzọ na ibu ọrụ n'etiti ndị Kraịst bi na ndị Juu." Akwụkwọ nke Royal Anthropological Institute 22: 496-515.
Kaell, Hillary. 2015. "Ịchọta ọzọ: Ịkọwa Onye Jentaịl n'Agha ndị Juu." Religion 45: 42-65.
Karp, Jonathan na Adam Sutcliffe, eds. 2011. Ihe mgbawa na History. Cambridge, UK: Mahadum Cambridge University.
Kinbar, Carl. 2001. "Ihe Ndị Na-adịghị Eche na Mkparịta ụka Ndị Juu na Ndị Kraịst," Akwụkwọ Princeton Theological Review 8: 30-37.
Kinzer, Mark. 2005. Ozizi Mesaịa bụ Mesaịa: Ịghaghachi Njikọ Ndị Kraịst na Ndị Juu. Ukwu Rapids, MI: Brazos Press.
Lehmann, David. 2013. “Ndị Juu ndị Mesaịa na Ndị Kraịst‘ Judaizing ’’ bụ ihe odide sitere na Brazil na Israel. ” Akwụkwọ a na-edebeghị. Nweta site na http://www.davidlehmann.org/adlehmann/2014/01/22/271/ na 20 February 2019.
O'Neil, Deborah. 2013. "Ịchọpụta ihe e ji amata na Papua New Guinea na n'oge gara aga." Akwụkwọ FIU. Nweta site na http://news.fiu.edu/2013/11/the-lost-tribe-tudor-parfitt-searches-for-identity-in-papua-new-guinea-and-the-past/68135 na 20 February 2019.
Parfitt, Tudor na Emanuela Semi, eds. 2002. Ntughari ndi mmadu: Ihe omumu nke di n'okpukpe ndi Ju. London: Routledge.
Ike, Patricia. 2011. "Na-akụda ókèala ndị Juu: ndị Juu na ndị Jentaịl nke America." Nova Religio: Journal of Alternative and Religious Emergencies 15: 69-91.
Rausch, David. 1983. "Mmalite nke ndị Juu Mesaịa na Akụkọ Amụma America n'oge na-adịbeghị anya," Nyocha Christian Scholar 12: 37-52.
Ihe Mere, Gabriela. 2005. "Egwuregwu Na-efu Mgbagwoju n'Ihe Ndị Juu nke Mesaịa: Mkparịta ụka Na-emegide Ozizi Ndị Kraịst." Kesher 18: np Nabatara na http://www.kesherjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=422 na 20 February 2019.
Rubin, Barry. 1989. Ị na-eweta akpa, m ga-ewetara Oziọma ahụ: Ikekọrịta Mesaịa ahụ na onye agbata obi gị nke ndị Juu. Clarkesville, MD: Ndị Juu na-ebipụta Mesaịa.
Sandmel, David. 2010. "'Mgbaghasị' na 'Judaizing' na Contemporary Church." Pp. 405-20 na Mmegharị mgbanwe: edemede nke ndị Juu na ndị Kraịst n'oge History, nke FT Harkins na J. Van Engen dere. South Bend, IN: University of Notre Dame Press.
Shapiro, Faydra. 2012. "Jizọs maka ndị Juu: Nsogbu Pụrụ Iche nke Mesaịa Mesaịa." Journal of Religion and Society 14: 1-17.
Warshawsky, Keri Zelson. 2008. "Ịlaghachi n'Ọdịda nke Ha: Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ Na-ahụ Maka Ọmụmụ Na-ahụ Maka Ọmụmụ Ihe Echiche nke Ndị Juu na Mesaịa n'Izrel n'oge a." PhD Dissertation, University of Hebrew nke Jerusalem.
Wasserman, Jeffrey S. 2000. Nzukọ Ndị Juu Mesaịa: Ole Ndị Na-ere Ahịa A Maka Ndị Mba Ọzọ? Washington, DC: University Press of America.
Winer, Robert. 1990. A na-akpọ: Akụkọ nke United States of America, 1915-1990. Pennsylvania: MJAA.